Mamadou Sakho oo si wanaagsan ula qabsaday kooxdiisa Crystal Palace – Gool FM
Mamadou Sakho oo si wanaagsan ula qabsaday kooxdiisa Crystal Palace
Haaruun Yuusuf March 8, 2017
(London), 08 Maarso 2017 –Daafaca Faransiiska Mamadou Sakho oo 6 bilood jiho u diidday kooxdiisii hore ee Liverpool ayaa si dhaqso ah ula qabsaday naadigiisa cusub ee Crystal Palace oo iyadu la soo wareegtay dhammaadkii suuqii kala iibsigii qaboobaha.
Sakho ayaa ayaa labadiisii kulan ee ugu horreysay guul la gaaray kooxdiisa oo 1-0 uga badisay Middlesbrough halka 2-0 ay kaga adkaadeen West Bromwich Albion, iyadoo sidaasina kaga dallacday Khadka Cassaanka ah ee naadiyada ugu hooseeya kala sarreynta kooxaha Ingiriiska.
James Tomkins oo ay daafaca Crystal ka wada ciyaaraan Sakho ayaa bogaadiyay qaab ciyaareedka daaficii hore ee Liverpool oo uu ku tilmaamay nin deggan oo difaaciisu aad u qurxoon yahay.
— – (@AnfieldRd96) March 4, 2017
Laacibkee ayay UEFA u qortay goolkii 2-aad ee Real Madrid ma Ramos mise Mertens?
MUUQAAL: Nike oo soo saartay dhar ay sheegtay inay ugu tala gashay gabdhaha Muslimiinta + Sawirro